Akpa akpa, bag akpa, bag bagï¼Œe akpa, Suppliers, China Factory customization - Dongguan Zhihao Akpa Industry Co., Ltd.
Ngwaahịa metụtara anụ ụlọ
Okenye nri ndị okenye
DongGuan bùxíngzhě Akpa Industry Co., Ltd.
Dongguan Zhihao Akpa Industry Co., Ltd. e hiwere na 2005. Ọ anya ndị ụlọ ọrụ mmepe na-emekarị na afọ nke lekwasị management. Ọ mepụtara n'ime a mbara enterprise tụnyere R&D, imewe, mmepụta na ahịa nke na-ebu na akpa. Otu n'ime ụlọ ọrụ benchmark na ụlọ ọrụ ibu. O toro site na mmadụ iri na abụọ na mbido ntọala ya gaa nnukwu ụlọ ọrụ buru ibu nke nwere ihe karịrị otu puku ndị ọrụ, mpaghara ụlọ nke ihe karịrị 80,000 square mita, na kwa afọ nke nde 6 nde. .Dongguan Zhihao Akpa Industry Co., Ltd. ka na-agbasoro mmụọ nke ụlọ ọrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe, ezigbo onye ọrụ ibe", n'ikwekọ na imekọ ihe ọnụ nke "uru, nkwanye ùgwù na ntụkwasị obi, mmepe na mmeri-mmeri" na " ezigbo ngwaahịa, ezigbo ọrụ, ezigbo ndị ahịa, yana ntụkwasị obi ụkpụrụ azụmahịa "" dị mma ", mmepe na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ, na-eduga usoro nke ụlọ ọrụ ibu. Companylọ ọrụ ahụ agafewokwa asambodo mba SGSDongguan Zhihao Handbag Industrial Co., Ltd. na -emekarị mepụtara: akpa azụmahịa, akpa kọmputa, akpa ezumike, akpa akwa, akpa azụ, akpa njem, akpa ugwu na ngwaahịa ndị ọzọ a na-ahụkarị na akpa akwụkwọ, ụlọ mposi. akpa, akpa akwa, mkpọchi paswọọdụ, nkpuchi anya, aka olu, mkpuchi igbe, ihe mkpuchi na ngwongwo na ngwa ndị ọzọ.
Ndá »‹ a dá »‹ mma ngwá mmiri na-egbochi mmiri á »rá» ¥ akpa, ha nwere ike á »bá» ¥ ghá »‹ naaná »‹ na-kulanka gá »‹ na ngwá á »rá» ¥ na-enyere gá »‹ aka na-ebu ha mfe, ma na-gá »‹ na ngwaá »rá» ¥ / ihe ndá »‹ á »zá» aká »rá». Nke a bara uru kará »‹ sá »‹ a maka ndá »‹ á »ká» ¥ eletrik kwesá »‹ rá »......
Akpa akwa, nke a na-akpá »kwa obere akpa ma á» bá »» obere akpa, gafere ahá »‹ rá »‹ site na ngwa njem ogologo oge gara aga. Ugbu a á »ghá» wo nhá »rá» bara uru, dá »‹ ka ihe eji eme akpa ma á »bá» ¥ akpa á »kwa. Enwere ezi ihe osisi ndiche nke a: akpa akwa nwere ike ime ka aka gá »‹ zuru ike, mana ......
Akpa ulo akwukwo Trolley
Ejiri akwa nylon Oxford mee akwa mpempe aká »¥kwá» nke á »¥ má» ¥ akwá »¥ kwá» trolley. Ihe mmepe a nwere ike ike na nguzogide abrasion. Igwe akwa ya dá »‹ elu na mmiri mmiri na-egbochi mmiri nwere ike igbochi mmiri ozuzo á »‹ tinye akpa ahá »¥. N'ime, nchikota a nwere ará »¥ má» rá »¥ kacha mma na ......
Akpa Duffle maka ụmụ nwanyị
Istmụ nwanyị ukwu akpa
Ugba ngwugwu ugwu
Jụrụ azu paaki
Flolọ nke atọ, No.187 Xinyi Road, Jilian Community, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province
Copyright 2020-2021 DongGuan bùxíngzhě Akpa Industry Co., Ltd.